(+95)9 445706655,(+95)9 445706667,(+95)9 445706668
Carpets add to the décor by using color, patterns and pile heights. The carpeting can create the image you want in your home or business. Carpet can help save energy as it is an important contributor to the insulation of the indoor environment. Carpet insulates floors as it providesapsychological feeling of warmth. It is easy to clean by vacuum cleaner. Our products are made from eco-friendly yarn fiber, No harm to human health and environment. Every part can be easily replaced when polluted or damaged by cigarette. Do not need to replace the whole part.
Place recommended –Office building ,Airport waiting room, Hotel, Bank , Apartment , Showroom ,Mosque ,Church ,Conference Room ,Lobby ,Hallway ,Corridor , Casino ,Restaurant
ကော်ဇောများသည် အရောင်၊ အဆင်ဒီဇိုင်းများနဲ့ အချပ်ထူထူ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့်အလှဆင်ရန် ပြုလုပ်ထား ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကော်ဇော်ခင်းခြင်းဆိုသည်မှာ သင်လိုချင်သောပုံစံကို သင်ဧ။်အိမ် (သို့မဟုတ်) သင်ဧ။်လုပ်ငန်းတွင် စိတ်တိုင်းကျပုံစံအတိုင်း ခင်းနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်ဇော်သည် ကြမ်းခင်းများကို လျှပ်စစ်မစီးအောင် ကာကွယ်ပေးပြီး နွေးထွေးသော စိတ်ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ဖုန်စုတ်စက်နှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရသည်မှာလည်း လွယ်ကူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏်ကုန်ပစ္စည်းများကို သိုးမွှေးချည်ဖြင့် ပြုလုပ် ထားပြီး လူအများကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထိခိုက်မှုမရှိပါ။ စီးကရက်မီးကြောင့် ပျက်စီးညစ်ညမ်း သွားလျှင်လည်း ပျက်စီးသွားသောနေရာ အစိတ်အပိုင်းလောက်သာ လွယ်ကူစွာ အစားထိုးခြင်း ပြုလုပ်ပေး နိုင်ပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းနေရာတစ်ခုလုံးကို အစားထိုးခြင်းပြုလုပ်ပေးစရာမလိုပါ။
ရုံးအဆောက်အအုံများ၊ လေဆိပ်ရှိဧည့်နားနေဆောင်များ ၊ ဟိုတယ်၊ ဘဏ်၊ တိုက်ခန်း၊ ကုန်ပစ္စည်း ပြခန်း၊ ဗလီဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ညီလာခံကျင်းပရာ ခန်းမ၊ ဧည့်သည် စောင့်ခန်းမ၊ စင်္ကြန်လမ်း၊ လောင်းကစားရုံနှင့် စားသောက်ဆိုင်ကဲ့သို့နေရာများတွင် လှပသေ သပ်စွာ ခင်းကျင်းနိုင်ပါသည်။
Size- 50 cm*50 cm
Certificates- ISO 9001,ISO14001,CE
Pile Height- 3~8mm
Material- Non woven backing & 100%PP/Yarn fiber